Ndụmọdụ Betgba Egwuregwu Elite - May 26 - site website - jluis37.com
Manchester City na Chelsea – 1 × two – Manchester City @ 1.90
Ọ bụn’ikpeazụ anyị! Egwuregwu UEFA Champions League bụ ebe a dị ka 2019, ọ bụ ihe gbasara Bekee. Ndị mmeri ọhụrụ Premier League-Manchester City ga-eche Chelsea ihu bụ ndị karịrị atụmanya d e mpaghara ụwan’oge a. Akụkụ nke Thomas Tuchel nwere ihe eji egwu egwu nke oge. Enyereghi ha isi n’agba Atletico Madrid n’agba nke iri na isii, mana n’ebe a ka ha kwụ. Otu mmeri pụọ na aha nke abụọ nke Njikọ Njikọ. Obodon’aka nke ọzọ nọ na Champions League nke ikpeazụ ha na nke ikpeazụ ha t European Cup. Oge ikpeazụ? Ọ bụ 1969 na UEFA Cup Winners ‘Cup. Ha meriri nke ahụ, yabụ na ha ga-enwe olile anya idobe ihe ndekọ aha ha nke 100 percent European Closing. Pep Guardiola bịara ebe a, mana ọbụghị nnukwu osisi dị otú a. Asịrị na-agba gburugburu d e ọ ga-anọn’ọrụ ahụ, mana egwuregwu a nwere ike ịgbanwe ihe niile. N’akụkụ na-achọsi otuto ike, nke Sergio Aguero duzirin’egwuregwu ikpeazụ un maka Cityzens, ha dị oke mma ịgafe na ọnụahịa a. Kun kwuru mgbe ọ banyere Town maka na ọ gaghị apụ rue mgbe ha meriri Champions League. Anyị na-atụ anya na ọ ga-emezu amụma ahụ na Satọde. 1 nkeji.
Brentford FC vs Swansea City – 1 × two – Brentford FC @ 1.92
Egwuregwu kachasị baa uru t soccer na-ahụ Brentford na ya ọzọ, na-anwa ime ihe ha na-enweghị ike imen’oge gara aga, yana ihe ha na-enwebeghị ike ime karịa egwuregwu itoolu, nke ahụ erutela Premier League. Ha na-enwe ihu ọma Swansea, bụ ndị meriri naanị abụọ n’ime egwuregwu asaa ha gara aga – ndị na-eme ngwa ngwa na-adabere n’ụdị. Brentfordn’aka nke ọzọ emeriela mmadụ isen’ime isii, ma ewezuga mfu ha d e Bournemouth na nsonye ahụ, efubeghị kemgbe mbido Machị mgbe ha dara 1-0 ka ọ ga-eburịrị Norwich na Carrow Road. Aesụ ahụ dị nson’afọ gara aga, ọ ga-ejikwa ahụmịhe nwetara miniature hụ na nsonaazụ ha na-agan’ụzọ ha, yana otu ụzọ ndị bookies si atụ anya. 1 nkeji.
Boston Celtics vs. Brooklyn Nets – Handicap (gụnyere oge) – Brooklyn Nets -6.5 @ 1.84
Celtics bụ ọgba aghara. Mmejọ ha anaghị arụ ọrụ ma dabere kpamkpam na obere egwuregwu iji mee ka ihe mee. Otu n’ime ndị egwuregwu a, Jaylen Brown, apụla maka oge. Onye ọzọ, Jayson Tatum, na-ele un anya na nkeji nke atọ nke egwuregwu two ma enweghị ike igwu egwuregwu ahụ, ya na onye nchịkwa Brad Stevens enweghị ike ikwu okwu na oke mmerụ ahụ. Ọ bụrụgodi na Tatum nwere ike ịkwado maka nke a asọmpi, ụgbụ ndị ahụ nwere ikike dị ukwuu maka Celtics iji merie. Blog t nhọrọ ngbanyen’ime ntughari oche ha na atọ nwere nnukwu ọmarịcha egwu na-egwu egwu, anyị na-atụ anya ka usoro nke Nets mmeri dị mfen’usoro a ga-agan’ihu ebe a – ọbụlagodi na egwuregwu that a laghachiri na Boston. Anyị na-atụ anya n’ihu; ụgbụ ahụ juggernaut ga-esi ísì ọbara na mmiri na Game 3 ma jiri aka kpuchie -6.5 akara iji tinye Celtics na eriri. 1 nkeji.
Dallas Mavericks na nke Los Angeles Clippers – Onye mmeri – Los Angeles Clippers @ 1.74
Ndị na – ahụ anya dị egwu, nke Playoff P d e Klaw na-eduzi, gbadara 2-0 d e Mavs bụ ndị ha kwusiri ike na njedebe oge iji kwekọọ. N’ịbụ ndị tufuru egwuregwu abụọ mbụ n’ụlọ, nke a bụ mmeri ọ ga – emeri iji zere ọ ga – ekwe omume Sweep Gentleman, yana ọbụlagodi usoro 4-0 kwụ ọtọ na – elewanye anya. Ọ bụ ihe ịtụnanya iche d e tupu ụgbụ ahụ miniature bụrụ ụgbụ ahụ, ndị otu Clippers a bụ ndị akpọrọ’ezigbo mma’,’ezighi ezi’, wdg. N’okpuru ebe that a bụ ndepụta ESPN’Expert Predictions’ maka egwuregwu that a:
Jerry Bembry: Clippers t 6
Nick DePaula: Clippers t 6
Nick Friedell: Clippers t 6
Kirk Goldsberry: Clippers t 7
Tim Legler: Clippers t 6
Zach Lowe: Clippers t 6
Tim MacMahon: Clippers t 7
Bobby Marks: Clippers t 6
Dave McMenamin: Clippers t 5
Monica McNutt: Clippers t 6
Kevin Pelton: Clippers t 6
Omar Raja: Clippers t 7
Jorge Sedano: Clippers t 6
Ramona Shelburne: Clippers t 5
André Snellings: Clippers t 5
Marc J. Spears: Clippers t 6
Royce Young: Mavericks t 7
Ohm Youngmisuk: Clippers Id 6
Nchịkọta ikpeazụ: Clippers (17), Mavericks (1). N’ezie, ọtụtụn’ime amụma ndị ahụ ka nwere ike ịbịa ma ọ bụrụ d e Clippers meriri anọ anọ ma ọ bụ anọn’ime egwuregwu ise fọdụrụ, mana ọ ga-ele anya na ọ gaghị adị. Agbanyeghị, anyị na-atụ anya ka ha buso ọgụ ma wepụ Sport 3.1 Unit.
Sebastian Korda Vs Yoshihito Nishioka – Onyemeri – Nishioka @ 2.85
Abụọ ndị that a na-ezute na nke mbụ na nkeji iri na ise nke ATP Parma, yana onye ọkpụkpọ ọ bụla na-achọ ịnweta ohere ịgan’ụzọ niilen’ọhịa nke na-adịghị asọmpi. Korda tupu izu a enweela ụlọ ikpe ụrọ mara mma, na-efunahụ na nke mbụ na Serbian Open, Munich Open na ATP Madrid tupu ha adaba na nke abụọ nke ATP Lyon. Nishioka n’aka nke ọzọ nwere ezigbo ọsọ na Lyon, zipụ Ugo Humbert na Gael Monfil tupu ha adaba na nke abụọ Stefanos Tsitsipas na mpaghara. Abụọ a dakọtara nke ọma, na Nishioka n’ụdị ka mma nọchiri anya uru dị ka ogbugba 2.70. 1 nkeji.
Vegas Golden Knights vs Minnesota Wild – Onye mmeri (gụnyere oge na ntaramahụhụ) – Minnnesota Wild @ 2.34
Mgbe egwuregwu isii gasịrị, na abụọ na ibiaghachi maka anụ ọhịa, anyị niile bụ ọbụna onye nzuzu a, nke a na-apụghị ịkọwapụta, usoro na-agan’ihu. Na Reg. oge H2H mgbe egwuregwu asatọ Vegas meriri atọ, Minnesota ise, na-eme akara ugbu a, gụnyere. usoro usoro egwuregwu a, Vegas 6: 8 Minnesota. Egwuregwu nke asaa na ikpebi ga-eme n’abalị Fraịde na Las Vegas, dịka Ọhịa laghachiri Sin City ebe ha merie ise n’ime mmeri asatọ ha! Ọzọkwa maka Anụ ọhịa, ọ ga-abụ nke anọ Game 7 d e aha akụkọ ihe only eme na mbụ kemgbe 2014. Minnesota si ndekọ t One Game 7s? Ezigbo 3-0, ya na egwuregwu atọ ọ bụla abịala n’okporo ụzọ. Egwuregwu 7 nke egwuregwu egwuregwu ọ bụla nke US ga-enye ndị ụlọ-ụlọ nsọ, ma 3.15 t 1 × two na-atụle ihe niile? Echere m nke ahụ nwere ike ịbata manan’ihi ọdịdị siri ike nke oge a, na-ahụ anọn’ime egwuregwu iri na anọ na-aga OT, ejiri m ahịa Winner dị ka mkpuchi. 1 nkeji.
Maka izu ụka a, anyị nwere LimaLimao na ihe ndị a.
Atletico Mineiro na nke Fortaleza – N’ime 2.5 @ 1.77
N’ebe a, anyị nwere ìgwè two ndị na-enwe oge nke ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ,n’ihi ya ekwere m t nzọ a dị mma maka egwuregwu a.
Otutu Nsogbu – 137.12 *
Ọ bụrụ na ịkụ nzọ anyị masịrị gị, nweere onwe gị idetuo na egwuregwu: 10417179.
Kasị mman’izu that a ma gbaa chaa chaan’ụzọ dị egwu!